VaBahamas vanogamuchira mafambiro matsva eCrystal Cruises anotanga kudonha uku
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Bahamas Kuputsa Nhau » VaBahamas vanogamuchira mafambiro matsva eCrystal Cruises anotanga kudonha uku
Bahamas Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Caribbean • Kurwisa • Hospitality Industry • nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
Bahamas Ministry of Tourism & Aviation iri kufara kuwedzera 3 nyowani dzeCrystal Cruises nzendo kune yayo iroster rwendo rwekufamba kunotanga kudonha uku uye munguva yepamusoro yechando mwaka. Crystal Cruises yazivisa nhevedzano yayo nyowani yekufamba mukati meCrystal Symphony, mwaka unononoka uchiswedera.
Kick kubva kune akawanda-mwaka marefu cruises ichave iri-husiku husiku rwendo rwakafanira kunonzi Bound yeParadhiso.
Rwendo urwu ruchatanga kubva kuNew York City yakananga kuNassau munaNovember 6, 2021, ine zviteshi zvekufona kuSan Salvador, Great Exuma, uye Bimini.
Tevere kumusoro kweGore Idzva ichave mhemberero yetropiki kutanga muna 2021 kubva kuNew York City uye kupera muna 2022 muThe Bahamas.
"Isu tinofara nekuenderera mberi kwekuda kwekufamba muThe Bahamas uye tinotarisira kugamuchira vafambi ava kudonha uku," akadaro Hon. Dionisio D'Aguilar, Gurukota reBahamas rezveKushanya & Aviation. "Crystal Cruises yakaratidza kuve kudyidzana kune zvibereko kwete chete kune iyo Bahamas indasitiri yekufambisa, asiwo indasitiri yemuno yekushanya sezvo ichibvumidza vatakurwi kuburuka muchikepe uye kuongorora bhizinesi, vashanyi vekushanya uye zviitiko muFamily Islands yedu."
The Bahamas ichatanga kuwanda kwemwaka wemwaka kuwedzerwa, kutanga nerwendo rwehusiku husiku, Bound yeParadhiso, kuvhura Mbudzi 7, 26, kubva kuNew York City kuenda kuNassau, vachidana San Salvador, Great Exuma neBimini.
Vafambisi vanogona kutanga Gore Idzva chaipo muBahamas musi waDecember 29, 2021, kuburikidza neTropical New Year's Celebration rwendo, inosanganisira rwendo rwehusiku gumi kubva kuMiami, Florida kuenda kuBimini, San Salvador, Long Island uye Great Exuma, iine yekumira yekupedzisira nehama nevakoma vedu vemuCaribbean muJamaica.
Rwendo rweBahamian Luxury rwendo ruchave nekubva kanoverengeka kutanga Ndira 22, 2022, kubva kuMiami, kusanganisira kumira muBimini, Nassau, San Salvador, Great Exuma neLong Island. Iyo akateedzana ichave iine maviri ekuwedzera kusevha munaFebruary 12, 2022, uye Kurume 5, 2022.
Crystal Cruises yashandura nzira iyo vafambi vanofamba muThe Bahamas, vachibvumira vanofamba kuenda ongorora zvishamiso zveFamily Islands kuseri kwemvura dzakanaka, kusanganisira mhuka dzesango, nzvimbo dzinozivikanwa, UNESCO World Heritage Sites, zvitoro zvemuno nekudyira.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve iri kuuya Crystal Symphony kuvhurwa, ndapota shanya wwwe
PAMUSORO PEMA BAHAMAS
Iine zvitsuwa zvinopfuura mazana manomwe uye cays uye 700 yakasarudzika chitsuwa nzvimbo, Iyo Bahamas iri makiromita makumi mashanu chete kubva kumahombekombe eFlorida, ichipa nyore kubhururuka kure kutiza iyo inotakura vafambi kubva kune avo ezuva nezuva. Zvitsuwa zveBahamas zvine hove dzepasi rose, kudhizaivha, chikepe uye zviuru zvemamaira emvura anoyevedza epasi uye mahombekombe. Iyo Bahamas inozivikanwa kuve iine mamwe emvura akajeka kwazvo pasirese. Zviripachena kuti muchadenga weNASA Scott Kelly akagovana mifananidzo yakawanda yezvitsuwa, apo aive achitenderera pasi mu16. Akatumira tweet kuti Bahamas "ndiyo nzvimbo yakanakisa kubva muchadenga." Ongorora zvese zviwi zvaunofanira kupa pa www.bahamas.com kana uri Facebook, YouTube or Instagram kuti uone nei Zviri Nani muBahamas.
New VP yeKutengesa yakaziviswa neN2L
Madhimoni eLa Digue Island
Dzimwe ndege dzeGrenada kubva kuUSA neCanada izvozvi
Fraport AG akabudirira anoisa tsamba yekuzivisa
IMEX Inodanwa kuti Nyowani National Indasitiri Mubairo Chikamu ...
Pasi Penzvimbo yeUpenyu hwechiJuda
Kubatanidza kufamba nekure kure mashandiro chiitiko chiri kukura
Kuteerera kwemutengi kunoenderera kwe10th edition ye IMEX ...
Sezvo zvirambidzo zvekufamba kweUS zvadzikira, nzendo kubva kuUK dzinozo ...
Tourism Trinidad Kuisazve simba neNew Man in Charge
Seychelles Gurukota rezveKushanya Rinoshanya Tourism ...